Laminated glass isatype of safety glass that holds together when shattered. Laminated natural organic elements provides your glass with unique patterns. The laminated glass encloses leaves, petals, thin branches, etc. design as specified by the customer. We can adjust the size of the pattern to any scale to meet the requirements of your glass application. Laminated glass is normally when there isapossibility of human impact or when the glass could fall if shattered and also for architectural applications.
Place recommended-skylight glazing, automobile windshields, exterior storefronts, windows, doors , shower partition and other architectural decorative places.
လာမိနိတ်မှန်သည် မတော်တဆကွဲသည့် အချိန်မှာပင် တစ်လွှာနှင့်တစ်လွှာ တွယ်ဆက် ထားသောကြောင့် သာမန်မှန်များနှင့်မတူ စိတ်ချရသည့် မှန်အမျိူးအစားတစ်မျိူး ဖြစ်ပါသည်။ သဘာဝအရင်း အမြစ်များဖြင့် အားဖြည်ထားသောကြောင့် သင့်ရဲ့မှန်သားများကို ပြိုင်ဘက်ကင်းပုံသဏ္ဍာန်များဖြင့် ပိုမိုလှပဆန်းသစ်စေမည် ဖြစ်ပါသည်။ မှန်သားအတွင်း ထည့်လောင်းထားသည့် သဘာဝသြဂဲနစ် လာမိနိတ်မှန်သည် သစ်ရွက် ပုံစံ၊ ပွင့်ဖက်ပွင့် ချပ်ပုံစံ၊ သစ်ကိုင်းပုံစံအစရှိသည့် ဒီဇိုင်းပုံစံများရှိပြီး ၄င်းတို့၏ အားပေးသူ ဖောက်သည်တို့မှ စိတ်ကြိုက် ပုံစံများအတိုင်း ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်လို အပ်သော ပုံစံအတိုင်းရရှိအောင် မည်သည့် အတိုင်းအတာမဆို အဆင်ပြေသောပုံစံကို ကျွန်ုပ်တို့က ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ သဘာဝသြဂဲနစ် လာမိနိတ် မှန်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် လူသားများဧ။် ကြိုးပမ်းအား ထုတ်မှုကြောင့် အလားအလာကောင်း သောထုတ်ကုန် တစ်ခုဖြစ်၍ လူသားများ အတွက် ဗိသုကာပညာရပ်ဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုဖြစ်ထွန်းမှု တစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။
လာမိနိတ်မှန်များကို ခေါင်မိုးရှိ လသာပေါက်များနှင့် မဟူရာကောင်းကင်အလှကြည့် မဟူရာခေါင်မိုး ၊ ကားရှေ့ မှန်များ ၊ စတိုးဆိုင်အပြင်ဘက်ခြမ်းများ ၊ပြတင်းပေါက်များ၊ တံခါးများ၊ရေချိုးခန်းဖွဲ့ခြင်းနှင့် အခြားဗိသုကာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အလှဆင်ရသောနေရာများ အစရှိသည့် နေရာများတွင် ခေတ်မှီလှပစွာ တပ်ဆင်အသုံး ပြုနိုင်ပါသည်
Thickness- based thickness resin of wire mesh laminated glass is 5mm
Based thickness resin of plants laminated glass is 3~4mm for others, at least2mm thickness of resin
Certificates- ISO 9001-2000,CCC,BS EN 14179-1:2005, BS 6206:1981